Shina 4-Ply Synthetic roofing underlayment orinasa sy mpanamboatra | ShiningPlast
ShiningPlast 4-Ply Synthetic Roofing Roofing underlayment dia miaro tsara ho an'ny sarobakanao sarobidy, ary koa ireo tompon-trano miasa ao. Nampiasa teknolojia vaovao izahay ho an'ny tanjona antikta sy matanjaka izay mamokatra traction tsara kokoa sy any amin'ny tafo.
: Safidy ny tenanao ho safidy ho anao
Tsy vitan'ny fanalavam-bolo vita amin'ny 4-layer fotsiny, amin'ny alàlan'ny tombony voajanahary samy manamboatra SBPP sy PP / PE. Manampy amin'ny endrika / fananganana manokana ho an'ny sosona SBPP izahay mba hananganana ny traction ary koa amin'ny alàlan'izany, mba hamehezana ny marika koa.
Mampiasa lamosina vita amin'ny gloss manokana miaraka amin'ny elastomer fanampiny isika mba hampitombo ny fifandonana eo anelanelan'ny tafo sy lamba. Izahay dia hanao ny andaniny roa amin'ny ambanin'ny tany antiskid.
Ny faharetan'ny underlayment ShiningPlast dia endri-javatra mahery vaika ho an'ireo mpaninjara fitaovana amin'ny tafo. Manatsara ny fomba fanenona izahay raha ampitahaina amin'ny rano nentin-drazana namboarina ho an'ny sasany mba hahazoana antoka fa mahatratra ny ambaratonga vaovao ny tavy sy ny ranomaso.
Ny fitsaboana UV ankehitriny amin'ny alàlan'ny sosona rehetra dia mahatonga ny fanalelonay ho mafy orina mandritra ny tara-masoandro UV maharitra.
• Mateza: ShiningPlast underlayment dia matanjaka sy maharitra. Indrindra fa manana tanjaka roaka mafy. Izy io dia hiaro ny tafontrano tsy hiala tampoka amin'ny ampahany triatra.
• maivana: ShiningPlast Syntetika ambanin'ny tany dia nanana fananana maivana izay mora entin'ny mpiangona.
• Antiskid: Modely / endrika namboarina manokana teo amin'ny sosona SBPP mba hampitomboana ny mivalona. Mampiasa lamosina vita amin'ny gloss manokana miaraka amin'ny elastomer fanampiny isika mba hampitombo ny fifandonana eo anelanelan'ny tafo sy lamba. Izahay dia manao ny andaniny roa amin'ny antikony ambanin'ny tany mankany amin'ny paradinao.
• Weather Resistant: Hatramin'ny niantombohan'ny fitrandrahana ny kofehy, manomboka miahy ny zazakely rehetra amin'ny alàlan'ny fampitaovana lehibe sy ny fanaovana sarin-tsary isika, ary manenona azy ireo amin'ny alàlan'ny firoboroboana mandroso, amin'ny alàlan'ny T-Die Coating mandra-pahavitan'izany, ary izany rehetra izany dia hiantoka ny fihenan'ny ala kely. , tsara / famatorana / tsimoka tsara. Ny fiarovana ny habaka ataonao dia ho azo antoka na mandritra ny rivotra mahery na amin'ny andro ratsy.
• Tear Proof: Tsy fametrahana tampoka tanteraka, ny underlayment ShiningPlast dia ho porofon'ny ranomaso amin'ny tanjaky ny trapezoid.
• Tsy tantera-drano: Tsy toy ny lavaka maro ary ny elanelan'ny paompy, ny kalitao ambony ShiningPlast ambony dia mahatonga ny santimetatra amin'ny fahitana lamba.
• UV-mahatohitra: Nampiasa ny fitsaboana sy fanamorana UV tsara indrindra izahay mba hiantohana ny fametrahana amin'ny fotoana maharitra UV.
• Peel sy Stick stickive dia misy
Ny teknôlôjia maoderina maoderina dia manolotra mpanjifa safidy / fiasa fanampiny izay ambanin'ny fanetren-tena. Ny tarika adhesive dia azo zahana amin'ny fangatahanao.
Manaraka: Taribola poleta maivana